किन भयो ऋतिक रोशन र सुजैन खानको डिभोर्स ? - Jhapa Online
किन भयो ऋतिक रोशन र सुजैन खानको डिभोर्स ?
कुनै समय बलिउडको लोभलाग्दो जोडी थियो ऋतिक रोशन र सुजैन खान । तर, सन् २०१४ मा यो जोडीले डिभोर्स गर्ने निर्णय लियो । एकाएक यो निर्णयले पूरै बलिउड नै आश्चर्यमा परेको थियो । ऋतिक रोशन बलिउडको उचाइमा थिए भने उनलाई घरपरिवारबाट पनि राम्रै सहयोग भएको अनुमान गरिएको थियो । तर, घरभित्र उनीहरुको सम्बन्ध टुक्रिने अवस्थामा पुगिसकेको थियो । विवाह गरेको १३ औ वार्षिकी मनाउनुको केही दिन अघि यो जोडीले छुट्टिने निर्णय लियो ।
अर्जुन रामपाल सुजैनको मिल्ने साथी थिए । उनीसँग अफेयर भएका कारण डिभोर्स भएको हल्ला बाहिर आयो । अर्जुन र उनकी श्रीमतीले उक्त समाचारको खण्डन गरे । यसको असर उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि देखियो । केही वर्ष लगत्तै अर्जुन र मेहरले पनि डिभोर्स गरे ।
तर, उनीहरुको कारणले ऋतिकको घरमा भने आगो नलागेको पछि खुल्न गयो । डिभोर्सका गर्दा सुज्यानले ४०० करोड मागेको खबरले पनि ठूलो चर्चा पायो । तर, उनले के कति रकम लिएर ऋतिकसँग डिभोर्स गरिन त्यो आज पनि रहस्यमा नै छ । एजेन्सी
प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बन्छ नमूना नेपाल’ गीत युट्युबमा सार्वजनिक
क्राइम पेट्रोलकी कलाकार प्रेक्षा मेहाताद्वारा आत्महत्या
शाहरुख खानलाई यस्तो डर
किन रोकियो आज रिलिज हुन लागेको बलिउड चलचित्र ‘कलंक’ ?